स्थानीय तह निर्वाचनः को–को बन्दैछन् मतदानबाट बञ्चित ? – Tourism News Portal of Nepal
स्थानीय तह निर्वाचनः को–को बन्दैछन् मतदानबाट बञ्चित ?
२८ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै नेपाली मतदानबाट बञ्चित हुँदै छन् । जो जहाँ छन् त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले यो निर्वाचनमा समस्या देखिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद सुवेदीले बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न हुँदै छ । ३१ वैशाखमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । तर, निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, कैदीबन्दी र विदेशमा रहेकाम नेपालीले स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छैनन् ।
निर्वाचनमा पहिलो घेराको सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीले पाएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचनमा नखटिने सुरक्षाकर्मीले पनि मतदान गर्न पाउनेछैन । त्यस्तै निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका ७५ हजार म्यादी प्रहरी पनि मतदानबाट बञ्चित हुने छ ।